Nnukwu mkpa nke ikuku ikuku na ogige ya | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Iji nyochaa mkpa nke ikuku ikuku na mpaghara ike ụwa, ọ dị mkpa iburu n'uche njikọ niile dị na nke ahụ dị mkpa iji mee ọla ahụ na okpueze, ikuku ikuku a ma ama nke ahụ mejupụtara ugbo ikuku, ifu nke teknụzụ nke mgbanwe ugbu a.
Ọzọ anyị ga-akọwa etu ugbo ifufe a si arụ ọrụ. E wezụga nke ahụ nnukwu mkpa nke ike emepụtara n'ihi na ha na ndụ anyị, na dị ka onye ọzọ nke a karịa nso n'ọdịnihu.
1 Ọrụ ugbo ifufe
2 Mkpa ume ikuku
3 Ugbo ikuku kachasị ukwuu na Spain dị na El Andévalo (Huelva)
4 Ebee ka Andévalo dị?
Ọrụ ugbo ifufe
Nrigbu nke a 1 MW tobaim arụnyere na ugbo ikuku nwere ike iru zere tọn carbon dioxide (CO2000) dị tọn abụọ (2), ọ bụrụ na ọkụ eletrik arụpụtara ejirila osisi thermoelectric wepụta.
N'iburu n'uche njikọ niile dị na yinye ahụ, ike na akụrụngwa dị mkpa ma maka n'ichepụta Banyere iwepu ikuku ikuku, enwere ike iburu n'uche na nguzo nke ike a na-eri bu ihe na-adọrọ mmasị.
A na-amụkwa usoro ndụ nke igwe ikuku. A 2,5 MW ikuku ikuku, na ndụ bara uru nke ihe dị ka afọ 20 n'okpuru ọnọdụ ịrụ ọrụ nkịtị, ọ nwere ike mepụta ruo 3.000 MW kwa afọ, nke zuru ezu maka oriri gburugburu Lọ 1.000 ruo 3.000 (dabere na oriri) kwa afọ. A na-eme atụmatụ ndụ bara uru nke igwe ikuku ikuku n'etiti afọ 20 na 25.
Nwere ike ịmata ọdịiche dị a "obere " ikuku igwe (site na iri puku kwuru iri watts ruo 10 KW) nke ejiri maka ịpị mmiri ma ọ bụ nye ọkụ eletrik n’ebe ndị dịpụrụ adịpụ, nke ikuku ikuku kachasị ike (site na 50 KW ruo 5 MW) jikọtara na netwọk eletriki, nke bụ ndị na-arịwanye elu. A na-achịkọta ndị nke ikpeazụ na ihe a na-akpọ Ogige Park.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe ikuku niile na-emepụta ọkụ eletrik nwere rotor nwere eriri ma ọ bụ agụba nke na-agba gburugburu gburugburu axis. Nke a bụ agbakwunye na mgbakọ nnyefe igwe ma ọ bụ mụbaa na, n'ikpeazụ, ka a Igwe ọkụ eletrik, ha abụọ dị n’elu ikpo okwu a kwụsịtụrụ n’elu ụlọ elu ahụ.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ogologo agụba Ọ ga-ekpebi ịmepụta ike ma ọ bụ obere ike ma ọ bụ obere ọsọ, ebe ọ bụ na ibu Ebe a na-ekpochapụ ukwuu ga-eru ma o doro anya na ga-emepụta a nwekwuo ume.
Mkpa ume ikuku
Ndị na-achọkarị ụgbọ ifufe na mba ndị mepere emepe na-esekarị okwu banyere mmetọ anya, mkpọtụ ya na mmepụta ya ezughi oke iji kpuchie ume. Na ike ifufe Ekwesiri ịtụle ya dị ka isi ike ọhụrụ, ume dị ọcha, na-agbanwe ma na-agbakwunye ụdị mmepụta ndị ọzọ.
Ma mgbaka na ọ nwere ike ịkpata, ha ga-adị ọtụtụ mgbe niile dị ala karịa ndị nke ụdị ume ndị ọzọ na-akpata dị ka, dịka ọmụmaatụ, dị ka kol ma ọ bụ ike nuklia.
Ka anyị ghara ichefu na ịbụ ike nke ikuku na-eme, na mmegharị ya, ọ bụ ike dị ike n'ihi ya ọ naghị emebi, ọ bụkwa mgbe ahụ otu n'ime ume kachasị dị ọcha Kedu ihe anyị nwere ike ịchọta.
Ihe ịma aka nke ọdịnihu bụ nweta ọnụ ala, na-enweghị mmetọ, nke ume na nke nwere ike ịnweta maka ihe niile mba nke ụwa (siri ike na lobbies n'ebe ahụ), nke na-enye ohere iga njem, ụlọ ọrụ na ezinụlọ iji belata ntụkwasị obi anyị nwere na mmanụ taa, ọ dịkwa ka ike ikuku bụ otu n'ime ndị kasị mma uzo ozo na nke a.
Ugbo ikuku kachasị ukwuu na Spain dị na El Andévalo (Huelva)
Spain, dị ka ọ bụ a ọsụ ụzọ na-eduga mba n'iji ike ikuku eme ihe, ọ bụ ezie na n'afọ ndị na-adịbeghị anya ntinye nke ogige ọhụrụ akwụsịla. Agbanyeghị, anyị ka nwere ike ịnya isi na anyị nwere ikuku ikuku kachasị ukwuu na Europe.
Ọ bụ El Andévalo mgbagwoju, nke na ya 292 MW Ọ bụ naanị ogige Whitelee, nke dị na Skọtland, nwere ike karịrị ike ya niile nke dị narị abụọ na iri abụọ na abụọ.
Mgbe ndị nwe Andévalo nwere afọ ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ ahụ kwadoro ọnọdụ ya onye ndu ike ike ikuku ma na Andalusia, yana 851 MW, na Spain niile, ya na 5.700 MW.
Ebee ka Andévalo dị?
Ọ dị n'etiti obodo Huelva nke El Almendro, Alosno, San Silvestre na Puebla de Guzmán, na ndịda mpaghara a nke Andalusia. Ihe mgbagwoju anya, nke malitere na-agba ọsọ na 2010Ọ bụ ala ikuku ikuku asatọ: Majal Alto (50 MW), Los Lirios (48 MW), El Saucito (30 MW), El Centenar (40 MW), La Tallisca (40 MW), La Retuerta (38 MW) , Las Cabezas (18 MW) na Valdefuentes (28 MW).
Na ngụkọta, nke e kwuru na mbụ 292 MW, nke na-enye ohere imepụta ọkụ eletrik kwa afọ nke nnukwu osisi a iji nye ụlọ 140.000 ma gụọ ya na ọ na-ezere nsị na ikuku nke na-abụghị ihe na-erughị 510.000 tọn nke CO2.
Ọ bụ na February 2010 mgbe Iberdrola Renovales weghaara ihe niile. Ugbo ikuku Los Lirios bu nke ikpe azu o nwetara, n'ime ugbo ahia ikuku na ire ahia na Andalusia banyere Gamesa. Ọrụ a, nke bụ akụkụ nke nkwekọrịta nke ụlọ ọrụ abụọ binyere aka na 2005 maka ọrịre nke ikuku ifufe na Andalusia. Ya Ikpeazụ akwụ ụgwọ karịrị nde euro 320.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ihe dị mkpa nke ike ikuku
NNA SPAIN dijo
Kedu ka o si kwe omume ịchọpụta ebe n'ókèala a ka arụnyere ugbo ikuku?
Kedu ihe ndị na-achọpụta ihe maka nhazi ya na ntinye ya?
Zaghachi ANA ESPAÑA
Avangrid, onye enyemaka nke Iberdrola, ga-ewuru Apple ugbo ikuku
110 megawatt igwe fotovoltaic SuperPark na Guillena (Seville)